प्रत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ, समानुपातिकमा पनि एमाले अगाडि
– अहिलेसम्मको गणनामा ३ प्रतिशत कटाउने ४ दल मात्रै
राजेश मिश्र, मंसिर २६, २०७४
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदा नै वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षमा दुई तिहाइ सिटमा जित हात पारेको छ । परिणाम आइसकेका १ सय ६१ स्थानमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनसहित वाम गठबन्धनले १ सय १३ सिट जितेको छ । अन्तिम परिणाम आउन बाँकी ४ क्षेत्रमा पनि एमालेकै उम्मेदवार अगाडि छन् ।
प्रतिक्षा काफ्ले, स्याङ्जा, मंसिर २६, २०७४
दुई निर्वाचन र चार प्रदेश सभा क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट क्षेत्र नम्बर दुईको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बाम गठबन्धनबाट एमाले उम्मेदवार पदमा अर्याल विजयी भएका छन् ।
३ प्रतिशत मत ल्याए मात्रै समानुपातिकमा सिट
राजेश मिश्र, मंसिर २७, २०७४
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विगतका दुइटा संविधानसभामा २२ हजार वा २५ हजार मत ल्याएका दलले प्रतिनिधित्व पाएजस्तै यस पटक त्यस्ता दलले अवसर पाउने छैनन् । अब बन्ने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल सदर मतको न्यूनतम ३ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले मात्रै समानुपातिक सिटबाट प्रतिनिधित्व पाउने छन् ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आफूलाई पराजित गर्ने कांग्रेसका पूर्वसांसद राजु थापालाई एमालेका नारायण मरासिनीले यसपटक १० हजार ७ सय २ को मतान्तरले हराएका छन् ।
एमालेले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति हतारमा नगर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ ।प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहेकाले प्रदेश प्रमुखसहितका दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नियुक्ति नगर्न एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको हो ।
सर्लाही क्षेत्र ४ मा कांग्रेस विजयी
क्षेत्र ४ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह विजयी भएका छन् । सिंहले २९ हजार ६ सय मत ल्याएका थिए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राजपाका राकेश मिश्रले २८ हजार १ सय ३६ मत ल्याए ।
भोजपुरमा समानुपातिकतर्फ एमाले अगाडि
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक मतपरिणाममा एमाले पहिलो दल बनेको छ । उसले २५ हजार ९९ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम व्यहोरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर त्यसका कारणबारेमा चर्चा हुन थालेको छ ।
डडेल्धुरामा समानुपातिकतर्फ कांग्रेस पहिलो, दोस्रो एमाले
- मोहन बुढाऐर, मंसिर २६, २०७४
डडेल्धुरा जिल्लाको प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक मत गणना सकिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नेपाली कांग्रेस डडेल्धुरा जिल्लामा पहिलो पार्टी भएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ २५ हजार १ सय ४८ मत प्राप्त गरेको छ ।
जोशीसहित कार्यकर्तालाई कारबाही
पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई चुनावमा हराउन भूमिका खेलेको भन्दै आफ्ना पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीसहित अन्य दुई कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न कांग्रेसको तनहुँ जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ ।
गाई काटेको अभियोगमा सातजना पक्राउ
गाई कोटेको अभियोगमा जिल्लामा मंगलबार सातजना पक्राउ परेका छन् । राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ डगमारामा तीनवटा गाई काट्दै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दुर्गा सिंहले जानकारी दिएकी छिन् । स्थानीय ३९ वर्षीय वीरसिंह थापासहित तीन महिला र चार पुरुष पक्राउ गरेको उनले बताइन् ।
घूससहित विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी पक्राउ
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ‘नो स्मोकिङ जोन’
हरि रोका, मंसिर २६, २०७४
संविधानत: संघीयता सहितको पहिलो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने स्पष्ट बहुमतसहित संघीय संसदमा उपस्थित हुने लक्षण देखिएको छ भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निश्चित छ । पूरा पढ्नुहोस्
कांग्रेसले गर्नुपर्ने समीक्षा र सुधार
सम्पादकीय, मंसिर २६, २०७४
मुलुकको सबभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भोग्नुपरेको पराजय बहसको विषय बनेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दल जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संस्था भएकाले यसको असफलताको समीक्षाका साथै सुधारका सम्भावनाबारे पनि सार्वजनिक छलफल जरुरी हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, मंसिर २६, २०७४
मलाई सिमरा पुग्नु थियो । प्लेन बिहान १०:४० मा उड्ने पक्का थियो । बिहान ९ बजे नै खाना खाएर घरबाट विमानस्थलतिर हुइँकिएँ । हुन त मेरो घरबाट विमानस्थल पुग्न सामान्यतया १० मिनेटभन्दा बढ्ता लाग्दैन, तर नेपालको खाल्डे सडकमा गुड्ने ट्राफिक । त्यसैले घरबाट विमानस्थल पुग्न एक घन्टाको अनुमान गरँें । पूरा पढ्नुहोस्
डा. जीवन बानियाँ, मंसिर २६, २०७४
जुन दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रथम कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई विभिन्न कमजोरी देखाई बर्खास्त गरे, त्यही दिनदेखि पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुँदै गयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू केही नगरे पनि डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नयाँ सीईओ पाएर, नौ महिना नहुँदै उहाँलाई विदाइ गरेर पनि युवराज भुसाललाई नयाँ सीईओ पाएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
डा. अंगराज तिमिल्सिना, मंसिर २६, २०७४
चुनाव हार्ने निश्चितजस्तै भएपछि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले घतलाग्दो ट्विट गरे, ‘भूतले खाजा खाने बेला उठिएछ ।’ रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, नवीन्द्रराज जोशी लगायतका हस्तीहरूको पराजयले कांग्रेसमा सुनामी आएजस्तै भयो, तर ७४ वसन्त पार गरिसकेका ढुंगानालाई २३ वर्षपछि राजनीतिमा फर्केर आउँदा आफू पुरानो भैसकेको कुरा ‘भूतले खाजा खाएपछि’ मात्रै महसुस भयो । पूरा पढ्नुहोस्
शक्तिको अन्धप्रयोग कि हितकारी शासन ?
अच्युत वाग्ले, मंसिर २५, २०७४
‘जो अझै अरूले नै हेरविचार गरिदिनुपर्ने अवस्थामा छन्, तिनलाई उनीहरूको आफ्नै क्रियाकलापबाट हुने हानि र बाह्य अत्याचारबाट पनि संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले समाजका ती पिछडिएको अवस्थामा रहेकाहरू, जहाँ सिङ्गै जाति युग असुहाउँदोगरी अपरिपक्व (ननएज) होस्, उनीहरूलाई (स्वतन्त्रताको हकमा) ध्यान दिन छाडिदिनुपर्ने हुनसक्छ । पूरा पढ्नुहोस्
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मंसिर २५, २०७४
मंसिर २१ र १० गते मतदानको दिनभन्दा निकै समयअघि नेपाल निर्वाचनमय भएदेखि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको थियो । तीन घेरा भएको सुरक्षा संयन्त्रको मध्यभागमा ७२ हजार नेपाल प्रहरी र ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित थिए भने त्यसको बाहिरी घेरामा ४० हजार सशस्त्र प्रहरीबल र त्यसभन्दा पनि बाहिरको अन्तिम घेरामा ६० हजार नेपाली सेनाले परिक्रमण गस्ती गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
रीता अधिकारी, मंसिर २५, २०७४
‘म यो चाहन्न कि महिलाले पुरुषमाथि अधिकार जमाउन्, महिलाले पहिला आफैंमाथि अधिकार जमाउनुपर्छ ।’ नारीवादी लेखिका मेरी क्राफ्टको यो भनाइ महिला हिंसा नियन्त्रणको सन्दर्भमा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यतिबेला महिला हिंसा विरुद्धको सोह्रदिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहेको छ । यो अभियान चलिरहेकै बेला पनि लैङ्गिक हिंसाका घटना उत्तिकै सार्वजनिक भइरहेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
न्युजिल्यान्डलाई टेस्ट सिरिज
एएफपी, मंसिर २६, २०७४
नेल वान्गरको घातक बलिङको मद्दतले न्युजिल्यान्डले मंगलबार वेस्ट इन्डिजमाथि दोस्रो टेस्टमा सजिलो जित निकालेको छ । वेन्गरले तीन विकेट लिए । जितका लागि पाहुना टिमले ४ सय ४४ रनको लक्ष्य पाएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
नेपालको सहज सुरुआत
म्यान अफ द म्याच नारायण जोशी ट्रफी ग्रहण गर्दै । तस्बिर सौजन्य : सीएटी
नेपालले एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजनमा सोचेअनुरुपकै सुरुआत गरेको छ । थाइल्यान्डमा सोमबार सुरु प्रतियोगितामा नेपालले थाइल्यान्डलाई १ सय ४३ रनले पराजित गर्‍यो । पूरा पढ्नुहोस्
अफगानिस्तानले पहिलो टेस्ट भारतसँग खेल्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट पूर्ण सदस्य राष्ट्रको मान्यता पाएको अफगानिस्तानले सन् २०१९ देखि टेस्ट खेल्न पाउने छ । पूरा पढ्नुहोस्
रियल र पीएसजी भिड्ने
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको रियल म्याड्रिड ४० वर्षपछि पहिलोपल्ट च्याम्पियन्स लिग उपाधिको ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छ । त्यसका लागि टोलीले अन्तिम १६ मा नेयमरसम्मिलित पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लाई पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार र्युइएफएको मुख्यालयमा भएको च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को ‘ड्र’ मा यी दुई टोली भिड्ने पक्का भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
चितवन टाइगर्सका कप्तानमा पृथु
चितवन टाइगर्सले पृथु बाँस्कोटालाई टीभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटका लागि कप्तान बनाएको छ । चितवन टाइगर्सका मालिक किशोर भट्टराईले पृथुजस्ता युवा खेलाडीलाई नेतृत्व दिन पाउनु आफ्नो टोलीका लागि गर्वको विषय भएको बताए । पूरा पढ्नुहोस्
मनाङका खेलाडीबाट बल खोस्ने प्रयास गर्दै आयोजक एलेभेन एरोजका निशान लिम्बू (रातो) । तस्बिर : वेदराज/कान्तिपुर
बेदराज पौडेल, मंसिर २६, २०७४
आयोजक एलेभेन एरोज क्लबलाई ५–२ ले पन्छाउँदै मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब सोमबार दोस्रो मनमोहन दुहबी गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनल पुगेको छ । राष्ट्रिय खेलाडीले भरिएको मनाङसँग आयोजक क्लब सुरुदेखि नै दबाबमा पर्‍यो । राम्रो पास भए पनि विपक्षी पोस्टमा पुगेपछि लय गुमाउँदा अपेक्षित नजिता निकाल्नबाट आयोजक चुक्यो । पूरा पढ्नुहोस्
फिफाको सूचना ढाँट्दै एन्फा
राजु घिसिङ, मंसिर २६, २०७४
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को सहमतिअनुसार भन्दै आइतबार दोस्रोपल्ट निर्वाचन सारेर १४ चैतमा चुनावी साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर फिफाले उक्त मितिलाई स्वीकृति नदिएको रहस्य खुलेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको राउण्ड अफ १६ को खेलमा युरोपका चर्चित टोली आमने सामने हुने भएका छन् । सोमबार युइएफएको मुख्यालयमा आयोजित ड्र अनुसार स्पेनिस लिग विजेता रियल म्याड्रिड र फ्रान्सेली टाेली पेरिस सेन्ट जर्मेन भिड्ने भएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
यज्ञ बञ्जाडे, मंसिर २६, २०७४
गत आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा गत असारसम्म कृषि क्षेत्रमा ९१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ४.७ प्रतिशत हो ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वायु सेवा सञ्चालक संघ (आओन) को गौशालास्थित कार्यालयमा छापा मारेको छ ।
मेगा बैंक नेपालको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनुपमा खुन्जेली नियुक्त भएकी छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि उनी मेगा बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिइन् ।
प्रशान्त माली, मंसिर २६, २०७४
डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरले सहकारीहरूको कार्य क्षेत्रका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ । कार्य क्षेत्रका आधारमा हस्तान्तरण हुने सहकारी संस्थाहरूको नामावली उसले प्रकाशन गरिसकेको छ ।
मध्यनेपाल नगरपालिकामा ३ मेगावाटको मिदिमखोला करापु जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेको छ । डेढ सातायता आयोजनाले ‘प्रि–टेस्ट’ गरिरहेको जनाएको छ ।
सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार करिब ३ अंकले घटयो । अघिल्लो दिन करिब ६ अंकले घटेको नेप्से सोमबार २.७४ अंकले घटेर १ हजार ५ सय २७.७५ मा ओर्लेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछिका दुवै कारोबार दिन लगातर नेप्से घटेको छ ।
गण्डक नहरमा गहुँ सिजनलाई पानी
शंकर आचार्य, मंसिर २६, २०७४
बारा, पर्सा र रौतहट सिँचाइको मुख्य स्रोत गण्डक नहरमा यस वर्ष गहुँ सिजनमा पानी आउने भएको छ । भदौ पहिलो साता आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको यो नहरको मर्मत सम्भारको काम लगभग सकिएकाले किसानले सिँचाइ सुविधा पाउने भएका हुन् ।
मासिक साढे २ अर्बको सुन आयात
राजु चौधरी, मंसिर २६, २०७४
पछिल्लो समय सुनको आयात ह्वातै बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा सुनको आयात ५२ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई हराउँदै एमालेकी पद्मा अर्याल विजयी - मंसिर २६, २०७४, १०:१९ PMजोशीसहित कार्यकर्तालाई कारबाही - मंसिर २६, २०७४, ०८:५१ PMमरासिनी विजयी - मंसिर २६, २०७४, ०८:४७ PMकंग्रेस अध्यक्षमा राहुल निर्विरोध - मंसिर २६, २०७४, ०८:३१ PMक्यालिफोर्नियाको डढेलो अनियन्त्रित - मंसिर २६, २०७४, ०८:३० PMप्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्न एमाले दबाब - मंसिर २६, २०७४, ०८:२४ PMप्रत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ, समानुपातिकमा पनि एमाले अगाडि - मंसिर २६, २०७४, ०८:१७ PM
विमल खतिवडा, मंसिर २६, २०७४
चितवनको कालिका नगरपालिका ६ मा रहेको बिके इट्टा उद्योगमा पुरिएर १ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य ८ जना घाइते भएका छन् ।
हुम्लामा भारी हिमपात कृषि बैंकका थप तीन कर्मचारी पक्राउछुवाछूत हट्न सकेन : विज्ञमोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु
चार वर्षअघि दयाहाङ राई र प्रियंका कार्कीलाई लिएर निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले डार्क कमेडीको नयाँ स्वाद भित्र्याए, ‘झोले’ फिल्ममार्फत । दर्शकले फिल्म रुचाए पनि । सोही फिल्मबाट टेकेन खड्का फिल्म निर्माणमा छिरेका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
कार्यशालामा सहभागी स्थानीय थाङ्का–पौभा कलाकारहरू सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै ।
पुरानो नेपाली कला मानिन्छ थाङ्का–पौभा । नेपालबाटै सुरु भएर यो चीनको तिब्बत पुग्यो, अहिले संसारभर फैलिएको छ । मुलुकभित्रै पनि थाङ्का–पौभा कलाको व्यवसायी फस्टाएको मात्रै छैन, थुप्रैले रोजगारी पाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
एक दर्जन सर्जकले आफ्ना लघुकथा वाचन गरेका छन् । लघुकथा समाजले गरेको कार्यक्रममा स्रष्टा सिन्धु गौतमले ‘एक दैनिक’ कथामार्फत वाचन सुरुवात गरिन् । उनीलगत्तै ‘खरानीको रङ’ लिएर आए लघुकथा समाज खोटाङका अध्यक्ष श्रीराम राई । पूरा पढ्नुहोस्
नृत्य समूह ‘कार्टुन्ज क्रु’ बाट छुट्टिएर आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेका सविन कार्की ‘बिस्ट’ युटयुबमा लगालग छाइरहेका छन् । केही अघि उनी ‘भाइरल भैदियो...’ गीतको भिडियोका कारण चर्चामा थिए । अहिले सविनकै निर्देशनमा बनेको ‘मिटिङ समवान फ्रम द सेम भिलेज’ शीर्षक कमेडी भिडियो युटयुब नेपाल ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा छ । पूरा पढ्नुहोस्
मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको ‘मसानटार’ को एउटा दृश्य । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
कुमार नगरकोटीको ‘झयालिञ्चा’ मञ्चन भएलगत्तै मण्डला थिएटर केही समय खाली रहयो । अन्य थिएटरका धेरैजसो रंगकर्मी पनि निर्वाचन नाटकतिर व्यस्त रहे । रंगमञ्चमा रस बसिसकेका दर्शक भने रित्तो थिएटर पुग्थे, नयाँ नाटकको अपेक्षा गर्दै । पूरा पढ्नुहोस्
ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलाकी जोफेन लामा ‘मिस नेसनल आइकन–२०१७’ भएकी छन् । राजधानीमा शनिबार अबेर सम्पन्न प्रतियोगितामा सुदूरपूर्वकी चेलीले ताजसँगै कार पाएकी छन् । २० प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उपाधि चुम्दै गर्दा उनको गहभरि आँसु थियो । पूरा पढ्नुहोस्
जनस्तरबाट स्वरसम्राटको उपाधि पाएका गायक एवं संगीतकार नारायण गोपालको सम्झनामा युवा गायकगायिकाहरूले कन्सर्ट गरेका छन् । अलग आर्ट हबले नागदहमा गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले स्वरसम्राट नारायणगोपालको स्वर र संगीत रहेका विभिन्न गीत प्रस्तुत गरे । पूरा पढ्नुहोस्
समय कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन । उमेरसँगै स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा आउने परिवर्तन स्विकार्नुको विकल्प पनि हुँदैन । तर, प्रयास गर्ने हो भने उमेरभन्दा भिन्न देखिन सकिन्छ । ताजा उदारहण हुन्, बलिउड अभिनेत्रीहरू रेखा र हेमा मालिनी । पूरा पढ्नुहोस्
कंग्रेस अध्यक्षमा राहुल निर्विरोध
राहुल गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको अध्यक्षमा सोमबार निर्वाचित भएपछि नयाँदिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालय अगाडि खुसियाली मनाउँदै समर्थकहरू ।तस्बिर : रोयर्टस
एजेन्सी, मंसिर २६, २०७४
राहुल गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका छन् । पार्टी अध्यक्ष पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा अन्य कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि सोमबार उनलाई अध्यक्ष घोषित गरिएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा एक सातादेखि फैलिएको डढेलो अनियन्त्रित बनेको छ । आगलागीका कारण हालसम्म भेन्टुरा र सान्टा वार्बारा काउन्टीको २ लाख ३० हजार एकड क्षेत्रफलमा फैलिइसकेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
लेबनानको राजधानी बेरुतस्थित अमेरिकी दूतावासअगाडि आइतबार गरिएको प्रदर्शन ।
रोयटर्स, बीबीसीमंसिर २५, २०७४
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिएको विरोधमा लेबनानस्थित अमेरिकी दूतावासमा भएका प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडपहरू भएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
‘युद्धको जोखिम बढ्यो’
जेफ्री फेल्टम्यान (बायाँ) र रि योङ हो ।तस्बिर : रोयटर्स
रोयटर्स, मंसिर २५, २०७४
उच्चस्तरीय राष्ट्रसंघीय अधिकारीले कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी तनावका कारण युद्धको जोखिम बढेको बताएका छन् । हालै चारदिने उत्तर कोरियाली भ्रमण सकेर फर्किएका राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिला प्रमुख जेफ्री फेल्टम्यानले कोरियाली द्वन्द्व ‘यथाशक्य चाँडो समाधान गर्न आवश्यक’ रहेको जनाए । पूरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, मंसिर २५, २०७४
भारतको छत्तीसगढमा एक अर्धसैनिक बलका सदस्यले गोली प्रहार गरी आफ्ना चार सहकर्मीको हत्या गरेका छन् । गोली प्रहारबाट एक जना गम्भिर घाइते भएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
ओपोले एफफाइभ सिक्स जीबी रेड एडिसन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । ओपो एफफाइभ सिक्स जीबी फेसनेबल रातो रङमा उपलब्ध हुनुका साथै यसमा अझ बढी सञ्चय क्षमता, ६ जीबी र्‍याम र ६४ जीबी रोमसहितको उत्कृष्ट प्रोसेसर जडान गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूरा पढ्नुहोस्
मान्छे जस्तै रोबोट !गुगल लेन्स चाँडैघर या कारको लक खोल्न ‘भाईबराइट’ ‘विच्याट’ ले फेसबुकलाई उछिन्यो